I-Antivirus ye-Ubuntu, ezimbalwa ukukhusela ikhompyuter yakho | Ubunlog
I-Antivirus ye-Ubuntu, ezimbalwa ukukhusela ikhompyuter yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ezimbalwa iAntivirus yoBuntu. Ngelixa ukuhlasela i-Gnu / Linux kuhlala kuyinto yokugqibela engqondweni xa kuziwa kwizoyikiso ezinxulumene nentsholongwane, ayisiyonto ekufuneka siyityeshele. Inyani yokuba iGnu / Linux ayinakho ukuqhuba iinkqubo zeWindows (isono Isiselo somdiliya okanye iinkqubo ezifanayo) oko akuthethi ukuba akufuneki silumke.
Ezi ntsholongwane zinokusasazeka, ngakumbi ukuba sineserver yeSamba okanye izixhobo zangaphandle ezinxibelelana rhoqo neGnu / Linux kunye neWindows. Singayifumana loo nto sisasaza iintsholongwane singaqondanga ngenethiwekhi yethu.
Ke zeziphi ezona nkqubo zibalaseleyo ze-antivirus zoBuntu esinokuthi sizisebenzise? Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa ezinye iinkqubo, kufuneka siqale sithathe amanyathelo okuzikhusela.
Kuba Ubuntu usinika "ivenkile" evaliweyo xa kufikwa kwisoftware esinokuzikhuphelela yona kunye nemithombo ephambili esiyikhuphele kuyo (ilayibrari ye-Ubuntu APT), kufuneka sikhuseleke xa sithatha amanyathelo okhuseleko. Ukuba awufuni i-antivirus yomntu wesithathu kodwa uyafuna kukugcine ukhuselekile ku-Ubuntu, Zama oku kulandelayo:
Sebenzisa ibhloko ebhaliweyo kwisikhangeli sakho (I-NoScript lukhetho olufanelekileyo kwiFirefoxUkukhusela kwiFlash kunye nokuSebenzisa okusekwe kwiJava.
Gcina Ubuntu buhlaziyiwe, ukumilisela uhlaziyo oluhambelanayo kunye nokuphucula imiyalelo.
Sebenzisa i-firewall. Gufw Luhlobo olufanelekileyo.
Nazi nje izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni. Ukuba sele ubenzile, kodwa usafuna ukhuseleko, funda ku.
1 Olunye unqulo lwe-Ubuntu
1.2 Iskena seentsholongwane zeClamTk
1.3 Isophos Antivirus
1.4 IComodo Antivirus yeLinux
Olunye unqulo lwe-Ubuntu
Ezi zezinye ze-antivirus ze-Ubuntu ezibonelela nge ukusebenza ngokufanelekileyo nangokukhululekileyo:
ClamAV siskena sentsholongwane esinakho sebenzisa i-Gnu / Linux desktop okanye iserver. Ngesi sixhobo, yonke into yenziwe ngomgca wokuyalela. Esi skena sigcina iliso kwimisonto emininzi. Kulungile kakhulu ngokusetyenziswa kweCPU.
Ingaba skena iifomathi ezininzi zeefayile, zivule kwaye uzivavanye, ukongeza ekuxhaseni iilwimi ezininzi ezisayina. Inokusebenza njenge-imeyile yesango lokuskena. Kufuneka kuthiwe ukuba ufuna i-virus efanelekileyo yokuskena kwi-Gnu / Linux kwaye awukhathali ukudlala nesiphelo, kuya kufuneka uzame iClamAV.
Iskena seentsholongwane zeClamTk
ClamTk ayisiyiyo intsholongwane kodwa sisicacisi esibonakalayo seClamAV antivirus uqobo. Ngayo uya kuba nakho ukwenza imisebenzi emininzi ngaphambili eyayifuna isiphelo sendlela kunye nolwazi lweClamAV. Iqela lophuhliso libanga ukuba lenzelwe ukuba kube lula ukusebenzisa iskena ukusisebenzisa kwimfuno kwiGnu / Linux.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kodwa ungayilibali loo nto ngumaleko wemizobo ngaphezulu kweClamAV. Ukuba ufuna i-virus elungileyo kwaye awuthandi umgca wokuyalela, ClamTk lukhetho lokujonga.
Sophos liqela lokhuseleko elizenzele igama kwihlabathi lokhuseleko. Zineemveliso phantse kuyo yonke into, zombini ezihlawulelwayo nezasimahla, kubandakanya Isixhobo se Ukuskena intsholongwane simahla YeGnu / Linux. Ngayo unako 'khangela iifayile ezikrokrelayo ngexesha lokwenyaniUkukhusela umatshini wakho weLinux ekusasazeni iiWindows, okanye iiMic virus.
IComodo Antivirus yeLinux
IComodo sele ikho ixesha elithile ngoku kwaye zisinika zombini iimveliso ezihlawulelwayo nezasimahla. NjengoSophos kunye no-Eset, banikezela ngobutyebi besoftware yokhuseleko kumaqonga amaninzi. IComodo Antivirus yeLinux unikezela Ukukhusela 'okusebenzayo' okunokufumana kunye nokuyeka izoyikiso ezaziwayo njengoko zisenzeka.
Ikwabandakanya inkqubo yokucwangciswa kokuhlola, ethi iququzelele ukucwangciswa kokusetyenziswa kwezixhobo zethu ngokwemikhwa yokhuseleko. Siza kufumana ithuba lokusebenzisa isihluzi se-imeyile, esisebenza ngeQmail, Sendmail, Postfix kunye ne-Exim MTA. Zininzi izinto ezintle ezinokuthintela ngokulula umatshini wethu okanye inethiwekhi ekubeni izaliswe ziintsholongwane kunye ne-malware.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Antivirus ye-Ubuntu, ezimbalwa ukukhusela ikhompyuter yakho
UKumkani omnyama sitsho
Umfanekiso weClamTk sele ungaphambi kwembali, inguqulo 5.25 ayifani nayo.
Ngokubhekisele kwiComodo Antivirus ndiyakhumbula ukuba Ubuntu 16.04 ibilahlekile kwezinye iifayile ukuyifaka ngaphandle kweengxaki kwaye kufuneka ikhutshelwe kwenye iwebhusayithi.
Chronobreak, isibali-xesha esenziwe nge-electron
Google Earth Pro, ufakelo kwi-Ubuntu 18.04 / Linux Mint 19